Joachim Low oo fariin ku aadan İlkay Gundogan u diray jamaahiirta xulka qaranka Germany – Gool FM
Joachim Low oo fariin ku aadan İlkay Gundogan u diray jamaahiirta xulka qaranka Germany
(Germany) 08 Sept 2018. Joachim Low ayaa ka codsaday jamaahiirta iyo saxaafda dalka Germany in weerarka ay ka joojiyaan laacibka asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga balse qaatay dhalashada dalka Jarmalka ee İlkay Gundogan.
waa in la joojiyaa weerarka lagu hayo Gundogan, sababtoo marka aflagaado loo geysto ciyaaryahan heer caalami ah, waa arin aan wanaagsaneen marna”.
“İlkay Gundogan wuxuu ku dhashay dalka Germany, qoyskiisu halkan ayuu ku noolyahay, saaxiibadiisna halkan ayay joogaan”.
Dhawaan ayay ahayd kadib markii uu Mesut Ozil si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ku fariistay ciyaaraha caalamiga ah, kadib markii uu la kulmay falala cusnsurimo ah inta lagu gudi jiray koobka aduunka 2018.
Laakiin sheekada ayaa u muuqata midaan wali dhamaanin maadaama ay wali jamaahiirta si weyn kaga soo hor jeedaan in maaliyada xulka Germany lagu sii arko laacibka Man City ee Gundogan.
"Waxay i dhahaan LAGA ROONE.".